မိုးအေးအေးမှာ ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ အလှဆုံး ကော်ဖီဆိုင်လေးများ
5 Jun 2018 . 7:12 PM
အုံ့မှိုင်းမှိုင်းကောင်းကင်အောက်က ပြိုလုလုတိမ်တိုက်တွေ၊ မိုးဖွဲတွေ၊ မိုးစက်တွေကြား ဝဿာန်ရာသီရောက်လာပြီဆို ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးကတော့ ကော်ဖီပူပူလေးတစ်ခွက်နဲ့ မိုးရာသီသီချင်း ခပ်ဆွေးဆွေးလေးတွေပဲမလား?
တစ်ယောက်တည်း Headphone လေး on ၊ သီချင်းသံ ခပ်တိုးတိုးဖွင့်ရင်း မိုးစက်တွေတဖွဲဖွဲအောက် ကော်ဖီဆိုင်လှလှလေးမှာထိုင်ရင်းဖီးလ်ရတာကိုက မိုးရဲ့အရသာပါ။ ဒီလိုအရသာကို ပြီးပြည့်စုံသွားဖို့ မိုးစက်သံစဉ်တွေနားဆင်ရင်း ထိုင်လို့ကောင်းမယ့် ကော်ဖီဆိုင်လှလှလေးတွေကို အခရာက ညွှန်ပေးချင်တယ်ဆို စိတ်ဆိုးမှာလား?
ဒါဆို မိုးနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံး ကော်ဖီဆိုင်လေးတွေကို ဒီ Post လေးကနေ မှတ်လိုက်ကြရအောင်။
(၁) Cafe Dibar
စမ်းချောင်း ပန်းခြံလမ်းနဲ့ ဓမ္မာရုံလမ်းမှာ ရှိတဲ့ Cafe Di Bar ဆိုင်လေး ၂ ဆိုင်ကို မရောက်ဖူးသေးရင်တော့ မိုးရာသီကိုဖြတ်သန်းရကျိုးမနပ်ဖူးနော်။ မိုးရာသီနဲ့ Vintage အငွေ့အသက်တွေ ဘယ်လောက်တောင် လိုက်ဖက်လိုက်သလဲဆိုတာ တွေးသာကြည့်တော့။ လိပ်စာတွေက အမှတ် (၁၇) ပန်းခြံလမ်း၊ ရန်ကုန်နဲ့ အမှတ် (၇၆) ဓမ္မာရုံလမ်း၊ မြေနီကုန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) The Gallery Cafe
နံရံကပ်သစ်ကပ်ပန်းစိမ်းစိမ်းလေးတွေ၊ အနုပညာမြောက် ပန်းချီကားတွေနဲ့ ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်လေးထဲက The Gallery Cafe ကရော မိုးရာသီအတွက် ဖီးလ်လို့ကောင်းလွန်းတယ်မထင်ဘူးလား။ လိပ်စာကတော့ အမှတ် (၉၈) C ၊ အင်းယားလမ်း၊ ရန်ကုန်ပါ။
Photo from The Gallery Cafe Facebook Page
(၃) Gloria Jean’s Coffee
မိုးစက်တွေကြား ကော်ဖီလေးနဲ့ ငြိမ့်ဖို့ဆို ကော်ဖီအရသာကလည်း အကောင်းဆုံးမှဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါဆိုရင်တော့ Gloria Jean’s Coffee လေးက မသောက်မဖြစ်ပါပဲ။ လိပ်စာတွေကတော့-Junction Square၊ Junction City၊ Star City၊ Myanmar Plaza၊ Time Link Condo ၊Yangon Int’l Airport နဲ့ 76 Mile Minu Rest Camp တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit from Gloria Jean’s Facebook Page
(၄) Acacia Tea Saloon
ဆရာစံလမ်းပေါ်က အလှဆုံးဖန်အိမ်လေးနဲ့ ဒီကော်ဖီဆိုင်လေးကတော့ မိုးရာသီမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Date Out လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဆိုင်လေးပါ။
(၅) Imperial Cafe and Book
စာအုပ်လေးဖတ်ရင်း သာသာယာယာ Quality Time လေးဖြတ်သန်းဖို့ဆို ပင်လုံထိပ်ထားစံအိမ်၊ ဦးဝိစာရလမ်းနဲ့ ချင်းတွင်းလမ်းထောင့်မှာရှိတဲ့ Imperial Cafe ဆိုင်လေးတော့ အရောက်သွားလိုက်ပါဦးလို့။
Photo Credit from Imperial Cafe and Book
(၆) The Plant House Cafe
မိုးနဲ့ သစ်ပင်စိမ်းစိမ်းလေးတွေဆိုတာ ခွဲလို့မှမရတာနော်။ ဒါဆိုရင်တော့ နွေးနွေးထွေးထွေး ဆိုင်ခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ မြန်မာ့လက်ရာမုန့်လေးတွေစားရင်း ကော်ဖီလေးရယ်၊ စာအုပ်လေးတွေနဲ့ ငြိမ့်ဖို့ဆို အမှတ် (၃၃) ညောင်တုန်းလမ်း၊ စမ်းချောင်းထဲက The Plant House Cafe ကိုသာ သွားလိုက်တော့နော်။
(၇) House Rule Cafe
မိုးသည်းတဲ့ ညတွေကတော့ အိမ်ထဲမှာနေရင်တော့ ပျင်းဖို့ကောင်းနေတော့မှာပါပဲ။ ဒါဆိုရင်တော့ မိုးစက်တွေကြား အပျင်းပြေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကော်ဖီသောက်ရင်း ဂိမ်းကစားကြမယ်ဆို ပုလဲကွန်ဒို Block C မှာရှိတဲ့ House Rule Cafe မှာ အဖွဲ့လိုက်ဆော့ဖို့ Game တွေအများကြီးက စောင့်နေတယ်သိလား။
Photo Credit From House Rule Cafe Page
(၈) Freedom Cafe
မိုးစက်တွေကြား နွေးနွေးထွေးထွေး အကြင်နာမျှဝေပေးမယ့်သူနဲ့ ဝေးနေပြီလား။ ဒါဆိုလည်း ကြောင်လေးတွေကို ပွေ့ဖက်ချီရင်း မိုးနေ့လေးကို ချစ်စရာကြည်နူးစရာဖြတ်သန်းကြမယ်လေ။ ဒါဆိုရင်တော့ အမှတ် (၈၁) ပန်းလှိုင်လမ်းက Freedom Cafe ကိုလဲ မမေ့နဲ့ဦးနော်။
Photo Credit from Freedom Cafe Page
(၉) The District Coffee Lounge
The District Coffee Lounge ကတော့ ထိုင်လို့လည်းကောင်းတဲ့အပြင် ကိတ်တွေရော၊ ကော်ဖီကောင်းကြိုက်သူတွေအတွက်တော့ ကွက်တိပါပဲ။ အမှတ် (၂၈) C ၊ ကုက္ကိုင်းရေကူးကန်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိပါတယ်။
Photo Credit from The District Coffee Lounge Page
(၁၀) Cafe Salween
အဝါရောင်မှိန်ပျပျမီးလုံးလေးတွေ၊ စာအုပ်လေးတွေနဲ့ မိုးရေစက်လေးတွေကြည့်ရင်း အေးဆေးအလုပ်လုပ်နိုင်မယ့် ကော်ဖီဆိုင်ကောင်းလေးပါ။ အမှတ် G -၁၅ Urban Asia Centre၊ ၄၇ လမ်းနဲ့ ၄၈ လမ်းကြားမှာပါ။
(၁၁) Coffee Circle
ကော်ဖီကြိုက်တဲ့သူတွေရော၊ တခြားအစားအစာတွေပါ ကောင်းကောင်းရတဲ့အပြင် ထိုင်လို့လည်းကောင်းတဲ့ ဒီဆိုင်လေးကတော့ အချိန်ကာလတော်တော်ကြာထိ နာမည်ရှိနေဆဲနော်။ လိပ်စာက ဓမ္မစေတီလမ်းမပေါ်မှာပဲနော်။
(၁၂) The Moment Tea Room
ပိတ်ရက် ကန်တော်ကြီးထဲ လည်ရင်း အေးဆေး ထိုင်မယ်။ ကော်ဖီသောက်မယ်။ ကန်ရေပြင်အလှခံစားမယ်ဆိုတဲ့ စုံတွဲတွေ၊ ကောင်မလေးတွေ အတွက်တော့ ကန်တော်ကြီး Fun စားသောက်ဆိုင်ရှေ့က The Moment ဆိုင်လေးကိုတော့ ရောက်ဖြစ်အောင်သွားလိုက်ဦးနော်။
Photo Credit From The Moment Tea Room
(၁၃) Yangon Bus Cafe
ဘတ်စ်ကားကြီးရဲ့ ပြတင်းပေါက်နားလေးတွေမှာထိုင်ရင်း မိုးရိပ်ပြေးနေတဲ့ကောင်းကင်ကိုငေးဖို့ဆို ကန်တော်ကြီးထဲမှာပဲ Yangon Bus Cafe လည်း ရှိသေးတယ်နော်။
Photo Credit From Yangon Bus Cafe Page
(၁၄) Paribawga Cafe
အိုဟောင်းနေတဲ့ နံရံတွေကြားမှာ ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်နဲ့ မိုးရက်တွေကို တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးဖြတ်သန်းဖို့ဆို အမှတ် (၁၀၄) ၊ ဘိုကလေးဈေးလမ်းက ပရိဘောဂ ကော်ဖီဆိုင်လေးက ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အတိတ်ဆိတ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးမှာပါ။
Photo Credit from Paribawga Cafe
(၁၅) Craft Cafe
နဝဒေးလမ်းနဲ့ ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်းထောင့်က Craft Cafe မှာရော မိုးရဲ့အရသာကို ကော်ဖီပူပူလေးတစ်ခွက်နဲ့ ထိုင်ရင်းဆွေးရင်း ခံစားဖူးပြီးပြီလား။
Photo Credit from Craft Cafe
(၁၆) Now and Then Cafe
မှန်ချပ်လေးတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ လမ်းဆုံလမ်းခွက ဘိုဆန်ဆန်ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ အချိုပွဲလေးတွေ၊ ကော်ဖီပူလေးတွေနဲ့ Wifi ကောင်းလေးလည်း ရှိနေတော့ မိုးနေ့တွေဟာ Perfect ပေါ့။
Photo Credit From Now And Then Cafe Page
ဒီဆိုင်လေးတွေအပြင် ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးတွေရှိရင်လည်း အချင်းချင်း အပြန်အလှန်မျှဝေသွားရအောင်နော်။
မိုးအေးအေးမှာ ထိုငျလို့ကောငျးတဲ့ အလှဆုံး ကျောဖီဆိုငျလေးမြား
အုံ့မှိုငျးမှိုငျးကောငျးကငျအောကျက ပွိုလုလုတိမျတိုကျတှေ၊ မိုးဖှဲတှေ၊ မိုးစကျတှကွေား ဝဿာနျရာသီရောကျလာပွီဆို ကိုယျ့စိတျခံစားခကျြနဲ့ အလိုကျဖကျဆုံးကတော့ ကျောဖီပူပူလေးတဈခှကျနဲ့ မိုးရာသီသီခငျြး ခပျဆှေးဆှေးလေးတှပေဲမလား?
တဈယောကျတညျး Headphone လေး on ၊ သီခငျြးသံ ခပျတိုးတိုးဖှငျ့ရငျး မိုးစကျတှတေဖှဲဖှဲအောကျ ကျောဖီဆိုငျလှလှလေးမှာထိုငျရငျးဖီးလျရတာကိုက မိုးရဲ့အရသာပါ။ ဒီလိုအရသာကို ပွီးပွညျ့စုံသှားဖို့ မိုးစကျသံစဉျတှနေားဆငျရငျး ထိုငျလို့ကောငျးမယျ့ ကျောဖီဆိုငျလှလှလေးတှကေို အခရာက ညှနျပေးခငျြတယျဆို စိတျဆိုးမှာလား?
ဒါဆို မိုးနဲ့အလိုကျဖကျဆုံး ကျောဖီဆိုငျလေးတှကေို ဒီ Post လေးကနေ မှတျလိုကျကွရအောငျ။
စမျးခြောငျး ပနျးခွံလမျးနဲ့ ဓမ်မာရုံလမျးမှာ ရှိတဲ့ Cafe Di Bar ဆိုငျလေး ၂ ဆိုငျကို မရောကျဖူးသေးရငျတော့ မိုးရာသီကိုဖွတျသနျးရကြိုးမနပျဖူးနျော။ မိုးရာသီနဲ့ Vintage အငှအေ့သကျတှေ ဘယျလောကျတောငျ လိုကျဖကျလိုကျသလဲဆိုတာ တှေးသာကွညျ့တော့။ လိပျစာတှကေ အမှတျ (၁၇) ပနျးခွံလမျး၊ ရနျကုနျနဲ့ အမှတျ (၇၆) ဓမ်မာရုံလမျး၊ မွနေီကုနျးတို့ဖွဈပါတယျ။
နံရံကပျသဈကပျပနျးစိမျးစိမျးလေးတှေ၊ အနုပညာမွောကျ ပနျးခြီကားတှနေဲ့ ဆိတျငွိမျရပျကှကျလေးထဲက The Gallery Cafe ကရော မိုးရာသီအတှကျ ဖီးလျလို့ကောငျးလှနျးတယျမထငျဘူးလား။ လိပျစာကတော့ အမှတျ (၉၈) C ၊ အငျးယားလမျး၊ ရနျကုနျပါ။
မိုးစကျတှကွေား ကျောဖီလေးနဲ့ ငွိမျ့ဖို့ဆို ကျောဖီအရသာကလညျး အကောငျးဆုံးမှဖွဈမှာပေါ့။ ဒါဆိုရငျတော့ Gloria Jean’s Coffee လေးက မသောကျမဖွဈပါပဲ။ လိပျစာတှကေတော့-Junction Square၊ Junction City၊ Star City၊ Myanmar Plaza၊ Time Link Condo ၊Yangon Int’l Airport နဲ့ 76 Mile Minu Rest Camp တို့ဖွဈပါတယျ။
ဆရာစံလမျးပျေါက အလှဆုံးဖနျအိမျလေးနဲ့ ဒီကျောဖီဆိုငျလေးကတော့ မိုးရာသီမှာ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ Date Out လုပျဖို့အကောငျးဆုံးဆိုငျလေးပါ။
စာအုပျလေးဖတျရငျး သာသာယာယာ Quality Time လေးဖွတျသနျးဖို့ဆို ပငျလုံထိပျထားစံအိမျ၊ ဦးဝိစာရလမျးနဲ့ ခငျြးတှငျးလမျးထောငျ့မှာရှိတဲ့ Imperial Cafe ဆိုငျလေးတော့ အရောကျသှားလိုကျပါဦးလို့။
မိုးနဲ့ သဈပငျစိမျးစိမျးလေးတှဆေိုတာ ခှဲလို့မှမရတာနျော။ ဒါဆိုရငျတော့ နှေးနှေးထှေးထှေး ဆိုငျခနျးကဉျြးလေးထဲမှာ မွနျမာ့လကျရာမုနျ့လေးတှစေားရငျး ကျောဖီလေးရယျ၊ စာအုပျလေးတှနေဲ့ ငွိမျ့ဖို့ဆို အမှတျ (၃၃) ညောငျတုနျးလမျး၊ စမျးခြောငျးထဲက The Plant House Cafe ကိုသာ သှားလိုကျတော့နျော။
မိုးသညျးတဲ့ ညတှကေတော့ အိမျထဲမှာနရေငျတော့ ပငျြးဖို့ကောငျးနတေော့မှာပါပဲ။ ဒါဆိုရငျတော့ မိုးစကျတှကွေား အပငျြးပွေ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ကျောဖီသောကျရငျး ဂိမျးကစားကွမယျဆို ပုလဲကှနျဒို Block C မှာရှိတဲ့ House Rule Cafe မှာ အဖှဲ့လိုကျဆော့ဖို့ Game တှအေမြားကွီးက စောငျ့နတေယျသိလား။
မိုးစကျတှကွေား နှေးနှေးထှေးထှေး အကွငျနာမြှဝပေေးမယျ့သူနဲ့ ဝေးနပွေီလား။ ဒါဆိုလညျး ကွောငျလေးတှကေို ပှဖေ့ကျခြီရငျး မိုးနလေ့ေးကို ခဈြစရာကွညျနူးစရာဖွတျသနျးကွမယျလေ။ ဒါဆိုရငျတော့ အမှတျ (၈၁) ပနျးလှိုငျလမျးက Freedom Cafe ကိုလဲ မမနေဲ့ဦးနျော။
The District Coffee Lounge ကတော့ ထိုငျလို့လညျးကောငျးတဲ့အပွငျ ကိတျတှရေော၊ ကျောဖီကောငျးကွိုကျသူတှအေတှကျတော့ ကှကျတိပါပဲ။ အမှတျ (၂၈) C ၊ ကုက်ကိုငျးရကေူးကနျလမျး၊ ဗဟနျးမွို့နယျမှာရှိပါတယျ။
အဝါရောငျမှိနျပပြမြီးလုံးလေးတှေ၊ စာအုပျလေးတှနေဲ့ မိုးရစေကျလေးတှကွေညျ့ရငျး အေးဆေးအလုပျလုပျနိုငျမယျ့ ကျောဖီဆိုငျကောငျးလေးပါ။ အမှတျ G -၁၅ Urban Asia Centre၊ ၄၇ လမျးနဲ့ ၄၈ လမျးကွားမှာပါ။
ကျောဖီကွိုကျတဲ့သူတှရေော၊ တခွားအစားအစာတှပေါ ကောငျးကောငျးရတဲ့အပွငျ ထိုငျလို့လညျးကောငျးတဲ့ ဒီဆိုငျလေးကတော့ အခြိနျကာလတျောတျောကွာထိ နာမညျရှိနဆေဲနျော။ လိပျစာက ဓမ်မစတေီလမျးမပျေါမှာပဲနျော။
ပိတျရကျ ကနျတျောကွီးထဲ လညျရငျး အေးဆေး ထိုငျမယျ။ ကျောဖီသောကျမယျ။ ကနျရပွေငျအလှခံစားမယျဆိုတဲ့ စုံတှဲတှေ၊ ကောငျမလေးတှေ အတှကျတော့ ကနျတျောကွီး Fun စားသောကျဆိုငျရှကေ့ The Moment ဆိုငျလေးကိုတော့ ရောကျဖွဈအောငျသှားလိုကျဦးနျော။
ဘတျဈကားကွီးရဲ့ ပွတငျးပေါကျနားလေးတှမှောထိုငျရငျး မိုးရိပျပွေးနတေဲ့ကောငျးကငျကိုငေးဖို့ဆို ကနျတျောကွီးထဲမှာပဲ Yangon Bus Cafe လညျး ရှိသေးတယျနျော။
အိုဟောငျးနတေဲ့ နံရံတှကွေားမှာ ကျောဖီလေးတဈခှကျနဲ့ မိုးရကျတှကေို တိတျတိတျဆိတျဆိတျလေးဖွတျသနျးဖို့ဆို အမှတျ (၁၀၄) ၊ ဘိုကလေးဈေးလမျးက ပရိဘောဂ ကျောဖီဆိုငျလေးက ရနျကုနျမွို့ရဲ့ အတိတျဆိတျဆုံးပတျဝနျးကငျြလေးတဈခုကို ဖနျတီးပေးမှာပါ။
နဝဒေးလမျးနဲ့ ဗိုလျရာညှနျ့လမျးထောငျ့က Craft Cafe မှာရော မိုးရဲ့အရသာကို ကျောဖီပူပူလေးတဈခှကျနဲ့ ထိုငျရငျးဆှေးရငျး ခံစားဖူးပွီးပွီလား။
မှနျခပျြလေးတှနေဲ့ဆောကျထားတဲ့ လမျးဆုံလမျးခှက ဘိုဆနျဆနျကျောဖီဆိုငျလေးမှာ အခြိုပှဲလေးတှေ၊ ကျောဖီပူလေးတှနေဲ့ Wifi ကောငျးလေးလညျး ရှိနတေော့ မိုးနတှေ့ဟော Perfect ပေါ့။
ဒီဆိုငျလေးတှအေပွငျ ထိုငျလို့ကောငျးတဲ့ ကျောဖီဆိုငျလေးတှရှေိရငျလညျး အခငျြးခငျြး အပွနျအလှနျမြှဝသှေားရအောငျနျော။